विश्वकप फुटवलका के छन् त रोचक कुराहरु ? — News of The World
विश्वकप फुटवलका के छन् त रोचक कुराहरु ?
२८ जेठ, काठमाडौं । १४ जुन यानि अबको ३ दिन पछि फिफा वल्र्ड कप २०१८ सुरु हुन गइरहेको छ ।
रसियामा हुन गइरहेको यस विश्वकपले विश्वकै ध्यान तानिरहेको छ । नेपालमा पनि विगतका वर्षहरुमा भन्दा यसवर्ष विश्वकपले युवा मात्र नभएर व्यवसायीहरुको समेत ध्यान तानेको छ । यतिबेला देशभरीका युवाहरु १४ जुनको पर्खाइमा छन् । उनीहरुले आफूलाई मनपर्ने समूहको समर्थनमा त्यहि अनुसारको टिर्शटहरु समेत खरिद गरिसकेका छन् । अहिले तपाइहरु न्युरोड, असन लगायतका सडकमा पुग्नु भयो भने विभिन्न देशका खेलाडीहरुले खेलखेल्दा लगाउने विभिन्न कलरका टिर्शटहरु खरिद गरिरहेको देखिन्छ । यसले टिर्शट व्यवसाय पनि निक्कै फष्ठाएको देखिन्छ ।
रसियामा सुरु हुन थालेको यो विश्वकप २०१८ २१ औं विश्वकप हो भने रसियाले पहिलोपटक विश्वकप आयोजना गर्ने मौका पाएको हो ।
के रहेछन त विश्व कप सम्बन्धी रोचक कुराहरु ?
-यसपटकको विश्वकपमा कूल ३२ टिम रहेका छन् भने सन् २०२६ मा कूल ४८ टिमले विश्वकपमा भागलिने बताइएको छ ।
-ब्राजिल एकमात्र देश हो जसले सबै विश्वकपमा भाग लिएको छ । ब्राजिलले ५ पटक जित हासिल गरेको छ । यो पटक पनि उसले जित हासिल गर्यो भने छैठौं जित हुनेछ ।
-जर्मनी पछिल्ला ३ विश्वकपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने देश बनेको छ । जर्मनीले २००६ मा १४, २०१० मा १६ र २०१४ मा १८ गोल गरेको थियो । जर्मनीले पछिल्ला तीन वर्षमा आफ्नो गोल बढाउदै लगेको छ । फुटवल पारखीहरु भन्छन् यसपटक पनि जर्मनीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ ।
विश्वकप खेल्ने ३२ देशहरुमा युरोपबाट रुस बेल्जियम, जर्मनी, बेलायत, स्पेन, पोल्याण्ड, आइसल्याण्ड, सर्बिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्वीटजरल्याण्ड, क्रोसिया, स्वीडेन र डेनमार्क गरेर १४ देशको सहभागिता रहेको छ ।
त्यस्तै इरान, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेविया, अष्ट्रेलिया गरी पाँच देश रहेका छन् भने अफ्रिकाबाट नाइजेरिया, इजिप्ट, सेनेगल, ट्युनेशिया र मोरक्कोले विश्वकपमा भाग लिएका छन् ।
त्यस्तै उत्तरी अमेरिकाबाट मेक्सिको, कोस्टारिका, र पाना रहेका छन् भने दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, उरुग्वे, कोलम्बो र पेरुसहित पाँचराष्ट्रले विश्वकपमा भाग लिएका छन् ।
-जर्मनी ब्राजिल र इटली पछि लगातार दुई विश्वकप जित्ने देश हो ।
-यसअघि ब्राजिलमा भएको विश्वकप विश्वका ३.२ अरब भन्दा बढीले हेरेका थिए । यसपाली अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
-विश्वकपमा खेलिने बल सन् १९७० देखी एडिडास कम्पनीले बनाउँदै आएको छ । विश्वकपमा प्रयोग हुने टेलस्टार १८ पनि आलोचनाको शिकार बनिसकेकको छ । कही गोलरक्षकका अनुसार यसपालीको बल धेरै उड्ने र हातमा नबस्ने खालको रहेको छ । तर बैज्ञानिक अध्ययनमा भने बल २०१० को भन्दा राम्रो छ । २०१० मा प्रयोग गरिएको जाबुलानीको धेरै आलोचना भएको थियो ।
-अहिलेसम्म जुन–जुन देशले जित हासिल गरेका छन् उनीहरुको कोच आफ्नै देशका रहेका छन् ।
-२०१८ को विश्वकप नाइजेरियाको लागि छैठौं विश्वकप हुनेछ भने दक्षिण कोरियाका लागि १० औं पटक र इरान दोश्रोपटक सहभागी हुनेछ । तर, अहिलेसम्म कनैपनि एशियाली देशले विश्वकपमा भाग लिनका लागि आफूलाई क्वालिफाइड बनाएका छैनन् ।
-जित हासिल नगरेपनि धेरैपटक खेल्ने देशमा मानिन्छ नेदरल्याण्ड । तर, यो पटक भने उसले रसियामा आयोजित विश्वकसमा खेल्ने मौका पाउने छैन ।
१९५८ पछि पहिलोपटक इटालीले रसियामा आयोजित विश्वकपमा आफूलाई क्वालिफाइड गर्न सकेन । इटाली अहिलेसम्म ४ पटक खेलेको छ । १९३४, १९३८, १९८२ र २००६ मा इटालीले विश्वकप आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो ।
-१९८६ पछि अमेरिकाले पनि आफूलाई विश्वकपमा योग्य बनाउन सकेको छैन ।
-सन् १९३० मा पहिलोपटक विश्वकप खेलिएको थियो । जसमा १३ देश सहभागी भएका थिए । उक्त खेल उरुग्वेको खेल मैदानमा भएको थियो भने, फ्रान्स र मेक्सीकोबीच पहिलो विश्वकपको पहिलो म्याच विधिवत रुपमा उद्घाटन भएको थियो ।
-दोश्रो विश्वकपमा १६ देश छनौट भएका थिए । त्यसपछि लामो समयसम्म १६ देशवीच नै फाइनल प्रतिश्प्रर्धा भइरह्यो । लामो समयपछि १९८२ को बाह्रौ विश्वकपमा आइपुग्दा यो २४ देशसम्म पुग्यो । पुन : १९९८ को १६ औं संस्करण देखि विश्वकप उपाधिको फाइनल चरणमा भिड्न पाउने देशको संख्या ३२ पुग्यो भने । हाल २०१८ का लागि पनि ३२ देश सहभागीरहेका छन् ।
-हाल २ सय भन्दा बढी देश फिफाका सदस्य छन् भने नेपाल पनि सन् १९७० मा फिफाको सदस्य बनिसकेको छ ।
अर्जेन्टेनी स्ट्राइगर मेस्सि घाइते
नेपालद्धारा चीन १० विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित, २७ रनको लक्ष्य १.५ ओभरमै भेटायो